हामी गरिब छौ हाम्रो पीडा कसैले बुझिदिन (फोटो सहित ) – मधेस
हामी गरिब छौ हाम्रो पीडा कसैले बुझिदिन (फोटो सहित )
3 years ago Prabhesh Kamati
सिरहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका वडा नं. ७ धरमपुर गाउँ बस्ने सात वटा यस्तो परिवारहरु छ्न ।
त्यो ग्रामिण भेगका गरिब जनताको आँखा भरि आसुका धारा छन् । उहिरुलाई विहान साझँको छाक पनि कसरी टारौ भन्ने पिडाले दिनहँु सताइरहेको हुन्छ । उनीहरु संग हृदय भरि पिडा र कष्टका व्यथाहरु पनि उत्तीकै छन् ।
शीर्षक पढ्दा पनि दुःख लाग्छ, किनभने हामी सबै गरिबकै सिमा रेखा भित्र छौं । संसारको गरिबतम मुलुकका हामीलाई यस्ता शीर्षकले अपमान गर्छ । गरिबका कुरा नगरी गरिबीको मुक्ति सम्भव पनि छैनभन्ने पनि हामी लाई थाहा छ ।
तेहि वडाका एक गरिब गंगा सदा भन्छन यो सरकारले लगाएको लकडाउनको अवस्थामा न त कतै काम पाइन्छ र काम नपाएर घरमा खाद्यान्न सामग्रीको अति आवश्यकता भएको छ ।खाद्यान्न नभएर भोक मरि लागेको छ । आमा बिरामी छ्न घरमा एक रुपैया छैन लकडाउन नभएको दिनमा जङ्गल पनि जान्थे तर अहिले जङ्गल पनि बन्द गर्देको छ बाहिर पनि जान्न दिदैन,हाम्रो अवस्था अहिले एकदमै दैनिय भाएको छ ।हामी भाइरस बाट त पछि मर्छौ तर गरिबले गर्दा पहिले नै मर्नेछौ जस्तो लागछ।
स्थानीय सरकारले हामीलाई १५ किलो चामल,५ किलो आटा र १ किलो नुन उपलब्ध त गराएयो तर ठुलो परिवार भएकोले त्यो पनि सकियो अब के खाने म जस्तो सात वटा यस्तै परिवार हरु छ्न जुन भोकै बसेको छ्न । सरकार सङ अनुरोध छ कि हामीलाई सके सम्म खाद्यान्न सामाग्री तथा परिवार चलाउन केही रकम सहयोग गरदिनु नत्र हामी यतिकै मर्नेछु सदाले भने ।
मुटु भरि गरिबी र दुःखका कथाहरु संगालेर बाचिरहेका छन् । सुखको अनुभती उनीहरु संग छैन् । जो विहान साझँ अर्काको भारी बोकेर छाक टार्ने जमर्को गर्छ उसलाई के थाहा हुन्छ सुख कस्तो हुन्छ भनेर ? तिनै गरिब जतनाहरु आज पनि जिबन दुःखमै पिरलिरहेको छ ।
तेहि गाउँमा बसेका बिपन्न परिवारहरु बिल्टु सदाको घरमा ४ जना महिला र चार जना पुरुष ,गगा राम सदाको घरमा २ जना महिला र ३ जना पुरुष,हिराइ सदाको घरमा ४ जना,सुरेश सदाको घरमा ४ जना, मगला सदाको घरमा पनि ४ जना, गङा महराको पनि ४ जना र सबित मण्डलको घरमा ३ जनाको परिवार छ्न। यी सब अति बिपन्न परिवारहरु छ्न ।
उनीहरुलाई धन पैसा भन्नु पनि थाहा छैन, धनको खोजीमा होइन विहान साझँको छाक कसरी टोर्ने भन्ने कुरामा पिरोलिरहेका छन् उनीहरु । तर जस्तो सुकै दुख कष्ट सहेर भएपनि जिवन गुजारा गरिरहेका छन् । अर्काको भारी नै बोकेर भएपनि अर्काको घरमा पसिनाको धारा चुहाउदै भएपनि जिवनलाई गुजारा गरिरहेकै छन् । समाजिक अभियनता सोभा साहले मधेश24 लाई बताए।
यसता बिपन्न परिवार प्रती सरकारको ध्यानाकर्षण होस ।
Previous Corona Virus Update (Covid19 Update)
Next बच्चा बोकेर औषधि हातमा बोकी हिड्नु’ रहर / आदेश उल्लँघन हुदै होइन
बच्चा बोकेर औषधि हातमा बोकी हिड्नु’ रहर / आदेश उल्लँघन हुदै होइन
2 years ago Prabhesh Kamati
Corona Virus Update (Covid19 Update)
तपाईंको जीवनको ९ यी लाभदायक खाने बानीहरू बनाउनुहोस् (9Tips for good health in Nepali)
4 years ago Prabhesh Kamati
धुम्रपान स्वास्थ्यमा हानिकारक छ
Copyright © All rights reserved. madhes.com | CoverNews by AF themes.